Apple waxay qorsheyneysaa inay haysato 2,5 milyan oo ARM MacBooks ah Febraayo 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Mashruuca Apple Silicon wuxuu u socdaa sidii markab gantaal. Daniel Craig Wuxuu horeyba nooga yaabiyey dhacdadii WWDC ee bishii Juun ee la soo dhaafay isagoo ku soo bandhigaya fikradda cusub ee shirkadda xaalad horumar leh. Dhowr maalmood ka dib qodobka muhiimka ah, astaamaha ugu horreeyay ee yar yar ee loo yaqaan 'mini mini' oo wata processor ARM ayaa horay loogu sii waday qaar ka mid ah horumariyeyaasha.
Waxaan sidoo kale sifiican u aqaanaa qalabkeeda. macOS Big Sur wuxuu mas'uul ka noqon doonaa ka faa'iideysiga fursadaha processor-yada cusub ee ARM, isagoo waliba la jaan qaadaya Intel Intel-yada hadda jira. Oo hadda waxaan ogaanay in wax soo saarka ballaaran ee kii ugu horreeyay ARM MacBooks. Waxaas oo dhan ayaa nalagu sharixi doonaa (waxaan u qaadaneynaa) Talaadada soo socota, Nofeembar 10.
Waxay umuuqataa in Apple damacsan tahay inuu horey usameeyay 2,5 malaayiin MacBooks oo leh qalab-gacmeedka cusub ee ARM bisha Febraayo 2021. Waa tan waxa warbixin cusub ay daabacday Dib u eegida Nikkei Asian.
Sida laga soo xigtay isha, amarada wax soo saarka ee bilowga ah ee loogu talagalay Apple Silicon-era MacBooks waxay u dhigantaa ku dhowaad 20 boqolkiiba 12,6 milyan oo unugyada MacBooks ee la soo saaray 2019.
Warbixintan ayaa sidoo kale sharraxaysa in processor-yada kori doona MacBook-yada cusub ay soo saari doonaan TSMC adoo adeegsanaya shan wax soo saar nanometer.
Tani waxay umuuqataa inay xaqiijineyso warar kale oo sheegaya in processor-radii ugu horreeyay ee ARM ee mustaqbalka Apple Silicon Macs ay noqon doonaan noocyo ka mid ah gunta hadda jirta A14 iPad Air iyo iPhone 12. processor-kani waa curiyaha kaliya ee loo sameeyay Apple oo loogu talagalay habka shan nanometer ilaa hadda.
Nikkei Asian Review sidoo kale waxay hubisaa in Apple ay soo bandhigi doonto kombuyuutarro badan oo Apple Silicon ah rubuca labaad ee 2021, iyo wixii la mid ah. cusboonaysiinta gabi ahaanba buugyaradeeda oo ka socota Macs oo leh processor-yada Intel-ka illaa kombiyuutarada oo ku saleysan processor-keeda gaarka ah ee leh qaab dhismeedka ARM.
Xaqiiqdii waannu dhageysan doonnaa waxa Apple noogu sheegayo Talaadada soo socota 10 bisha November 19dii fiidnimo ee Spain dhacdadii dalwaddii ahayd "Hal Wax Ka Badan ..." oo ay diyaarisay, shaki la'aan waxay diiradda saartay xilligii cusbaa ee Apple Silicon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay qorsheyneysaa inay soo saarto 2,5 milyan Apple Silicon MacBooks illaa Febraayo 2021